Tsy andoavan-ketra aho. Ahoana ny fomba hisorohana ny haba amin'ny varotra amin'ny baikoko? - DataNumen
Mampiasa izahay MyCommerce.com ary FastSpring.com hiatrehana ny fifanakalozana an-tserasera.
Raha manafatra amin'ny alàlan'ny MyCommerce.com ianao dia mila mandoa ny haba amin'ny varotra amin'ny kaomandinao aloha. Avy eo aorian'ny fankatoavana ny didy, alefaso aminay ny antontan-taratasy fanamarinana tsy andoavan-ketra na ID VAT na GST manan-kery ho anay, avy eo haverinay ny haba ho anao.
Raha manafatra amin'ny alàlan'ny FastSpring.com ianao dia azonao atao manakana ny hetra tsy hangonina amin'ny baikonao amin'ny alàlan'ny fanomezana ny VAT na ny GST ID anao amin'ny fotoana ividiananao. Ny saha misy ny VAT na ny GST dia mety misy na tsia mifototra amin'ny firenenao. Ireo firenena avy any Amerika dia tsy manana ny sahan'ny VAT / GST satria tsy mihatra izany:
Avy eo ny firenena avy any Eropa na i Azia dia hanana ny sahan'ny VAT / GST, toy ny etsy ambany:
Azonao atao ny manindry ny "Enter VAD ID" na Enter GST ID "hampidirana ny VAT / GST ID anao mifanaraka amin'izany.Raha manadino ny mampiditra ny VAT / GST ID anao amin'ny baikoo ianao, na manana mari-pankasitrahana afa-tsy haba, dia afaka manafatra amin'ny hetra amin'ny varotra ianao. Ary aorian'ny fankatoavana ny didy, Mifandraisa aminay hamerina ny haba.
mividy, GST, mba, levitra, hetra mivarotra, afaka haba, VAT
Inona no mitranga aorian'ny andefasako ilay baiko?Manome fihenam-bidy amin'ny fanabeazana ve ianao?